JustUnfollow: Jikwaa, Detuo ma chọta ndi na-eso Twitter | Martech Zone
JustUnfollow: Jikwaa, Detuo ma chọta ndi na-eso Twitter
Sunday, Jenụwarị 26, 2014 Douglas Karr
Maka ndị gị na Twitter, anyị ka na-egwu egwuregwu na-atọ ọchị nke ndị na-eso ụzọ adịgboroja, ndị na-eso ụzọ SPAM, na ndị na-eso ma na-agbaso gị iji nwaa ịmanye gị ịgbaso ha ka ha wee bulie netwọkụ ha. M ka nwere mmasị na Twitter mana nke a bụ akụkụ dị egwu nke ikpo okwu - echeghị m na Twitter na-eme nke ọma iji jikwaa ya àgwà nke ikpo okwu.
Ngwaọrụ m jiri ọnwa ole na ole ugbu a bụ JustU soro:
E nwere ụzọ njirimara atọ masịrị m n’elu ikpo okwu ha:
Na-agbaso ndị na-achọghị - ichoputa ndi folks nke kwadoro m nke m soro. Achọrọ m inwe mkparịta ụka na Twitter ma kesaa ozi na ndị folks… Agaghị m eso ndị folks na-esoghị m.
Hashtag ọchụchọ - Na-eji nyocha ha hasagag, enwere m ike ịchọta ma soro akaụntụ nwere mmasi yiri nke a. Ezigbo ihe atụ maka blog a bụ ịchọta ihe ọmụma infographic ahịa.
Detuo Na-eso - enwere ndị na - eso gị ma ọ bụ saịtị ndị na - esote gị. Nwere ike iso ndị na-eso ụzọ ha na-atụ anya ịgbasa ndị na-eso gị.
Whitelist na Blacklist - enwere ụfọdụ akụkọ ị ga - agbaso ọbụlagodi na ha anaghị eso azụ. Ma enwere ndị ọzọ ị nwere ike ịchọrọ ịgbaso ọzọ mgbe mkparị na-enweghị isi ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị. Jikọtara ya na ndị ọzọ, nke a nwere ike bụrụ ọkacha mmasị m kachasị mma!
JustUnfollow nwekwara a ngwa mkpanaaka. Otu okwu nke nwere ike ịkpaghasị gị gbasara ọrụ a bụ enweghị ike nnukwu ịgbaso ma ọ bụ megharia… nke ahụ abụghị nsogbu ha, ọ bụ njedebe ọzọ nke Twitter na API ya. Have ga-anọrọ onwe gị pịa usoro ọ bụla ma ọ bụ meghee.
Tags: blacklist eso ụzọchọta ndị na-eso ụzọtoo ụmụazụachọ hashtagna -esoTwitterwhitelist na-eso ụzọ
2014 State nke Digital Marketing
Nnukwu Cartel: Ecommerce maka ndị omenkà
Jan 27, 2014 na 12: 57 AM
Daalụ maka ide banyere JustUnfollow. Obi dị anyị ụtọ na ngwa ahụ bara uru!
Onye ndebanye ọdịnaya, JustUnfollow